Ilkay Gundogan oo ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican Premier League bishii Janaayo.
Home Horyaalka Ingiriiska Ilkay Gundogan oo ku guuleystay abaalmarinta ciyaaryahanka ugu fiican Premier League bishii...
Xiddiga qadka dhexe ee kooxda Manchester City Ilkay Gundogan ayaa loo magacaabay ciyaaryahanka Premier League ee bisha Janaayo.
Xiddiga heerka caalami ee Jarmalka ayaa la filayay inuu u dagaallamo booskiisa kooxda City xilli ciyaareedkan, laakiin qaab ciyaareedkiisa ayaa ka soo baxay awood ilaa xoog, taasoo gacan ka geysatey qaab ciyaareed aad u wanaagsan kooxda Pep Guardiola.
Waxa ay ku guuleysteen toban kulan oo wareega ah si ay u furaan xoogaa meel neefsashada ah oo ka sarreysa miiska Premier League, lix ka mid ah guulahaas ayaa yimid bishii Janaayo taasoo keentay in Gundogan uu ka soo muuqdo dadkii badnaa.
Si sax ah looguma xusin awoodiisa gooldhalinta, City lambarka 8-aad ayaa shabaqa soo taabtay shan jeer lix kulan oo horyaalka ah, oo ay kujirto labo jeer oo cajiib ah kulankii West Brom ee The Hawthorns taasoo ku dhiirigelisay inay ku guuleystaan shan gool.
Waxa uu dhaliyay goolkii xilli ciyaareedkii ay la ciyaareen Crystal Palace garoonka Etihad Stadium, isagoo ka booday Andros Townsend ka hor inta uusan kubad ka dhex dhicin geeska Vicente Guaita.
Gundogan ayaa sidoo kale shabaqa ka soo taabtay Chelsea garoonka Stamford Bridge, isagoo garaacay Edouard Mendy oo ka yimid geeska garoonka isagoo dhaliyay gool ay City ku soo martay guul raaxo leh.
Bandhigyo taxane ah oo cajaa’ib leh ayaa ku filnaa in la arko isaga oo la dagaallamaya tartan adag oo abaalmarinta ah In kasta oo taliyihii kooxda Man United Bruno Fernandes aan la magacaabin ka dib markii uu ku guuleystay abaalmarinta bishii Nofeembar iyo Diseembar, kabtanka Aston Villa Jack Grealish wuxuu ka mid ahaa tartamayaasha ugu horreeya, halka dib u soo celinta Leicester James Maddison uu isna ku jiray orodka.
Saaxiibka ay isku kooxda yihiin ee City City John Stones ayaa sidoo kale loo magacaabay xiddig sideed ciyaartoy ah – laakiin waa Gundogan oo qaata taajka.
Waxa uu rajeynayaa inuu sii wado qaabkiisa fiicn madaama uu u muuqdo inuu ku guuleysto Premier League markii seddexaad tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay kooxda Borussia Dortmund sanadkii 2016.
Previous articleMikel Arteta oo sheegay inuusan mardambe baraha bulshada uusan soo dhigin doonin wax ku saabsan isaga iyo Kooxdiisa kadib cunsuriyad lagula kacay.
Next articleXidiga ugu Feecan Premier League Bisha January oo la shaaciyay